Ahoana no hahatonga azy ho mpanamboatra bakimihetsika mahomby?
Ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny teknikam-pamboarana ilaina amin'ny rohibe izay hahatonga anao ho mpanamboatra bakalorea matihanina. Manana fikasana isika hampisehoana fa tsy ny backlinks rehetra no manana kalitao ary mitovy ny lanjany. Tianay ny hampakatra ity lohahevitra ity satria ny fahombiazan'ny tranonkala spammy dia mety hanimba ny ezaka rehetra ataonao SEO ary hampihena ny laharana eo amin'ny SERP.
Fanatsarana ny tranokalanao na ny fahitana ny blôgy amin'ny fisidinana dia ny momba ny fanatsarana ny maodilim-pitadiavana, saingy mbola mety ho sarotra be ho an'ny tompon'ny tranonkala maro. Asa vaventy goavana toy ny Google, Yahoo! na Bing dia voatery hanova ny algorithmika misy azy. Izany no antony tokony hahafantaranao ireo fanavaozana vaovao rehetra hijanona ao anatin'ilay lalao. Ny toe-javatra mitovy amin'izany dia amin'ny fananganana rohy. Vao haingana, mora ny ho mpanamboatra bakimihetsika mahomby. Tsy maintsy namorona lahatsoratra maromaro fotsiny ianao, navoakany tao amin'ny tranonkala fifaneraserana samihafa ary nahazo rohy vaovao avy any ivelany ho an'ny tranonkalanao.
Ity paikady fananganana rohy tsotra ity dia tsy miasa intsony. Amin'izao fotoana izao, Google dia tsy misy afa-tsy ny kalitao sy ny lisitra mahazatra izay avy amin'ny sehatra manerantany. Ny rindran-damina hafa dia toa tsy misy ilana azy amin'ny ezaka SEO anao na miteraka sazy fikarohana. Na izany aza, tsy antony ny kivy. Betsaka ny paikady ilaina, ny fampiasana mpanamboatra bakalorea matihanina amin'ny fampiharana ataon'izy ireo izay hanampy anao hampitombo ny marikao sy hampitombo ny vola miditra.
Ity fanadihadiana fohy ity dia hanampy anao ho lasa mpanamboatra bakimihetsika matihanina ary hampitombo ny fidiram-bolanao an-tserasera.
Top-tetik'asa fanorenana ambaratonga ambony
Ho an'ny mpivarotra an-tserasera sasany dia toa mora sy tsotra ny fomba fananganana rohy. Na izany aza, tsy toy ny toe-javatra mitranga amin'ny fananganana rohy mahazatra araka ny torolàlana momba ny fikarohana. Tsy misy teknikam-pitsaboana intsony ao amin'ny fanentanana fananganana SEO. Raha tokony hampiasa tranonkala bilaogy tsy miankina, rindrambaiko rohy, sy programa afrikana isan-karazany, ny tompon'ny tranokala dia tokony hanana tetikady miompana mivantana ary manangana ny rohy amin'ny fomba tsara.
Amin'izao fotoana izao, ny fananganana rohy mahomby dia mikendry tombom-barotra, tombontsoa ary fahatokisana. Amin'ny maha-mpanamboatra bakimihetsika matihanina anao, mila miara-miasa akaiky amin'ireo tanjona Google ianao ary manaraka ny torolalana rehetra. Ny iray amin'ireo lafiny lehibe indrindra amin'ny fananganana tranonkala izay ankasitrahan'i Google dia tena manan-danja sy manampy ny votoaty. Io karazana votoaty io dia mora zaraina amin'ny mpiserasera ary mandray fanamarinana fiaraha-monina tsara. Mila mamorona votoaty voalamina tsara ianao ary mamorona vohikala manamboatra tranonkala, mba hahazoana antoka fa hahita ny valin'ny fangatahany haingana araka izay azony ny mpitsidika anao.
Alohan'ny handinihanao tranonkala ho an'ny backlink, mila mandinika ny tompon'andraikitry ny sehatra ianao. Misy fitaovana maro azo ampiasaina ao amin'ny tranonkala izay afaka manome anao fampahalalana mahaliana momba ny fahefam-panjakana sy ireo toetra tena manan-danja amin'ny tranonkala. Manoro hevitra anao aho hampiasa ny fitaovana web analyter ho an'ity tanjona ity.
Ankoatra izany, azo atao ny mandinika ny kalitaon'ny backlinks misy tranonkala iray. Raha ambony io kalitao io dia mety mahatsiaro maimaimpoana ny miara-miasa amin'io tranonkala io ianao.
Noho izany, ny mpanamboatra bakalavaly matihanina dia mamela backlinks amin'ny tranokala izay manana fidiram-bola avo lenta mba hiantohana ny mpanjifany TOP toerana amin'ny SERP sy ny fifamoivoizana tsy tapaka Source .